पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज २५ गते सोमबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Kavrepati
पारसकी छोरी पूर्णिका २० बर्षमा नै ३ बालबालिकाको अभिभावक
विवाह पछि विनय जंगले भने, ‘जातिय विभेद हटाउन मैले पुजालाई बेहुली बनाएँ’ (भिडियो हेर्नुस्)
‘अब नेपालको भूमी कहिल्यै टेक्दिन’ भनेका प्रमुख प्रशिक्षक अलमुताइरीले फेरे बोली, नेपाली खेलाडीमा उत्साह
पुरुषका लागि बन्यो गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने
लिभिङ टुगेदरमा बस्न केटा चाहियो भन्दै रमिला कार्की मिडियामा, धेरै माया गर्ने केटाले यसरि भेट्न सक्छ मलाई भनेर आफ्नो चाहाना खुलाईन रमिलाले (भिडियो हेरौ)
ह्वात्तै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ,१ व्यारेलमा यति धेरै बढ्यो..
विवाहको उमंग नसकिदै ठुलो शोकमा डुबे मनोज गजुरेल
दसैंको मध्यराती परालको थुप्रोमा प्रेमीसंग आप’त्ति’जनक अवस्थामा भेटिएकी अमृताले…
Home / राशिफल / पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज २५ गते सोमबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
admin 1 week ago	राशिफल Leaveacomment 94 Views
तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् असोज ३१ गते देखी कार्तिक ६ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,असोज २९ गते शुक्रबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज २५ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर ११ तारीख आश्विन शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथी पश्चात षष्ठी तिथी ज्येष्ठा नक्षत्र सौभाग्य योग कौलव करण चन्द्रमा बृश्चिक राशिमा आनन्दादि योगमा पद्य योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु पचलीभैरव यात्रा विल्वपत्र निमन्त्रण गैर(आवासीय नेपाली दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झन्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगानिमा ध्यान दिनु होला । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य धैर्यताका कारण पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । अरुको सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कुरा काट्रने ब्यक्ति हरुको बृद्यि हुनेछ । शत्रु सबल रहलान । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । नयाँ लगानि तथा साजेदारीकार्यका क्षेत्रमा भने उत्तम समय रहनेछ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य आम्दानि हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र जन को साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला ।मन प्रशन्न गराउने समाचार प्राप्त रहनेछन । अध्यन अध्यापनका सन्दर्भमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता हुनेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्रको सम्भाबना रहेको छ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) खानपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कामको क्षेत्रमा भने साधारण झन्झट तथा अप्जस सहनु पर्ला । दाजु भाई बिचको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । आय आम्दानि मा बृद्यिहुने योग रहेको छ । सामान्य यात्रा पस्चात मान सम्मानको प्राप्ती हुन सक्नेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खानपानमा बिशेष रुचि रहने छ । मधुर बाणीका कारण बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा भने समय मध्यम रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) मान्यजनको भेटघाट बाट मन प्रशन्न रहला । मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार रहने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहन सक्छ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट ब्यहोनु पर्ला । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ । ब्यापार ब्यवसाय मा भने सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेको छ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोकाहुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । कुराकाट्ने ब्यँितहरु को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ । आय आर्जनका लागी भने समय उत्तम रहेको छ । साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नबढेको नै राम्रो हुनेछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) मित्रजनहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । गैर ब्यक्तिको पुर्ण बिस्वास नर्गनु राम्रो हुनेछ । कुराकाट्ने ब्यतिहरुबाट बच्नु पर्ने छ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । परीबारका कोहि सदस्य हरुको स्वास्थ क्षेत्रमा झमेला पर्न सक्छ । बौधिक बिकास तथा विद्या प्राप्ति योग रहेको । कार्यक्षेत्रको लगन सिलतामा बृद्धि हुनाले मान सम्मानको योग रहेको छ । समय मध्यम रहनेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्र गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
Previous सुनिल शेट्टीलाई ल्याएर नेपाली फिल्म बनाउँदै कैलालीका मुकुन्द भट्ट
Next मेरै अगाडी बाउ छोरी संगै सुते…..
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज २८ गते बिहिबार तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असोज २८ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर १४ …